News | Nepali congress
News | Tag: Nepali congress
विप्लव समूहमाथि सरकारले गरेको निर्णयमा देउवाको समर्थन
विराटनगर । नेपाली कांग्रेस्र सभापति शेरबहादुर देउवाले हिसात्मक गतिविधी गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताएका छन् । सरकारले मंगलबार बेलुका हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै विप्लव समूहको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोहीबारेमा बुधबार विराटनगर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै देउवाले हिसात्मक गतिविधी गर्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त भएको बताएका हुन् ।
सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने कांग्रेसको ‘अस्त्र’ ग्यास उद्योगी
काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने गतिलो ‘अस्त्र’ भेटेको छ ग्यास उद्यागी । निर्मला पन्त, डा. गोविन्द केही, पशुपति शर्मापछि बूढानिलकण्ठ दरबारले ग्यास उद्योगीको ढाडमा टेकेर सरकारलाई टाउकोमा हान्न खोजेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीको ठम्याइ छ । यस्तो आरोप लगाउनुको कारण हो, स्याल कराउनु कुखुरा हराउनुको संयोग ।
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलद्वारा मन्त्रीको निधनमा दुःख व्यक्त
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन हुनुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्री अधिकारीसहित मृत्यु भएका सातै जनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको हो ।
काँग्रेसकाे कार्यसमिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसमा अनुशासन समिति गठन सम्बन्धमा सहमति हुन नसक्दा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको छ । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक दिउँसो २ः३० बजेसम्म बस्न सकेको थिएन । बैठक बस्नुअघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच समिति गठन सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास भएको थियो ।
काेइराला परिवार विरूद्ध सभापति देउवाले दिए आक्रामक अभिव्यक्ति
वीरगन्ज । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कोइराला परिवार विरुद्ध आक्रामक भएका छन् । कांग्रेस पर्साले गरेको जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेस पार्टी कोइराला परिवारको बपौती नभएको बताएका हुन् । ‘कोइराला थर हुँदैमा पार्टी सभापति नै बन्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क नाजायज हो’, उनले भने, ‘कोइराला थर छ भन्दैमा पार्टी सभापति बन्न पाउनै पर्छ भनेर भन्न पाइन्छ ?’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले ओली सरकार विश्वास गुमाएको बाबुजस्तै भएको बताएको छ । सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारको वर्ष दिनको कामको समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेस बैठकमा देउवाको मुख रातो हुँदै जाँदा डायरीमा आरजुले के टिपिन् ?
काठमाडौँ । माघ १० गते कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारविरुद्ध थालिने आन्दोलनबारे छलफल हुने एजेण्डा थियो । गगन थापा र डा. रामशरण महतले सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने र त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने कोणबाट कुरा उठाएका थिए ।